Apple izao dia mamela anao hamerina ny fividianana avy amin'ny App Store mandritra ny 14 andro | Vaovao IPhone
Talohan'ny faran'ny taona dia misy vaovao fa orinasa mpiantoka maro no efa nitaky hatry ny ela: Apple dia mamela anao hamerina ny fividianana natao tao anatin'ny 14 andro farany nefa tsy mila manome fanazavana akory, satria tiantsika izany. Ity zava-baovao ity dia mamaly ny fitsipika ankehitriny ao amin'ny Vondrona eropeana momba ny lalànan'ny mpanjifa, ary manomboka androany dia afaka manomboka manao fanatanjahan-tena ianao. Ity politika fiverenana ity dia misy amin'ny fividianana vita amin'ny iTunes, App Store ary Mac App Store, ary esorina ireo karatra fanomezana, izay tsy azo averina raha vao nampiasa ny kaody ianao mba hamerenana ny mizana. Ahoana ny fomba hangatahana ny volanao? Izahay dia manome anao ny antsipiriany rehetra etsy ambany.
Satria mpampiasa Apple aho ary bilaogy sy forum matetika, ny fitarainana momba ny tsy fahafahan'ny fitsapana fampiharana alohan'ny hividianana azy dia zavatra matetika. Betsaka aza no manamarina ny fampidinana ireo rindrambaiko piraty satria tsy azo atao ny mitsapa azy alohan'ny andoavany azy. Na dia tsy nampiavaka an'i Apple mihitsy aza ny politika tena mametra raha ny amin'ny famerenana ny vola rehefa nitaky azy ny iray, dia foana tsy maintsy nampiasa antony lehibe ianao ary mandehana amin'ny fizotran'ny famerenana izay mety hiafara amin'ny famerenana ny vola ao amin'ny kaontinao na tsia. Ankehitriny dia tsotra kokoa izao: mangataka ianao hanafoana ny fividianana sy voila, tsy misy fanazavana fanampiny.
Raha mbola ao anatin'ny 14 andro ny fividianana ianao azonao atao ny mitaky ny vola averinao. Mila mandeha any amin'ny pejy noforonin'i Apple ho an'ity tanjona ity, karohy ny fangatahana, jereo fa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny asa ianao hitaky ary tsindrio ny bokotra «Tatitra». Ny menu drop-down dia hisokatra amin'ny safidy isan-karazany avy eo, mila misafidy ny safidy "Te-hanafoana ity fividianana ity aho." Avy eo tsindrio ny "Delete fividianana" ary dia izay.
Toa efa ren'i Apple ny vavaky ny maro, na dia any Eropa ihany, satria any amin'ny toerana hafa manerana an'izao tontolo izao dia tsy misy vaovao momba izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Apple dia mamela anao hamerina ny fividianana avy amin'ny App Store mandritra ny 14 andro
perkis dia hoy izy:
Azoko atao ve ny mividy sarimihetsika na boky ary averiko any aoriana?
Mamaly an'i perkis
Tsy ilay sarimihetsika, azo antoka. Rehefa manomboka mahita azy ianao dia tsy afaka mamerina azy intsony. Tsy haiko na hiasa ireo boky ireo.
Eny, ny fitsaboana ireo mpandahatra programa dia mahafaty indray, raha toa ka efa mieritreritra izy ireo fa ny programa iray dia afaka mivarotra ny fangatahana azy ho an'ny 0,89, (satria tsy tokony hisy akory izany vidiny kely izany hamidy)
Ny ho tratran'izy ireo dia ny misafidy programa ho an'ny tsena hafa ary manadino ny Vondrona eropeana, saingy io tetikady io, na dia tsy fanahy iniana aza, dia hampitsahatra ireo mpandrafitra indie fanta-daza ao amin'ny Vondrona eropeana hanome lalana ho an'ny ny mahazatra, arahaba paoma Tsy afaka ny hanenina bebe kokoa.